Libia: Any Benghazi daholo ny maso (Lahatsary) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2011 1:28 GMT
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny Fikomiana Libya 2011 ity lahatsoratra ity.
Ny fikomian'ireo vahoaka Libiana manohitra ny Kolonely Muammar Al Gaddafi dia mety nanomboka tany Benghazi na tsia, kanefa ilay tanàna faharoa lehibe indrindra eo amin'ny firenena no foibe politika sy fanahy mpikomin'ny hetsika. Izy no mampiantrano ny gazety voalohany manohitra an'i Gaddafi sy ny governemanta tetezamita manohitra an'i Gaddafi. Miaraka amin'ireo hery ara-tafiky ny mpikomy izay voadoana mafy ihany tamin'ny fanafihan'ireo herin'i Gaddafi, na izany aza, mety ho lasa toerana famaharana farany ho an'ny fahafahan'ny Libiana i Benghazi.
‘Teraka tany Tonizia, lehibe tao Ejipta…ary ankehitriny manao sorona ny tenako eto Lybia… fahalalahana no anarako' – soratsoratra ao Benghazi avy ao amin'ny Twit Pic.
Ny Alarobia 17 Martsa, niharana fanafihana an'habakabaka avy amin'ireo hery mankasitraka ny fitondran'i Gaddafi i Benghazi. Naminavina rahateo i Gaddafi sy ny zananilahy Saif fa hilavo lefona ao anatin'ny 48 ora ny tanàna.
Ireto misy tatitra vitsivitsy tao amin'ny Twitter avy amin'ny vahoaka eny an-toerana na manana solontena any Benghazi.
@bungdan: Nisy fidobohana roa +- iray ora lasa izay tany benghazi, misy setroka avy ao amin'ireo trano mifanila vodirindrina. Tsy maintsy hiala aho, nefa misy namako tokony hiantso afaka fotoana vitsy. #libya
@NahlahAyed: Manomboka ny fanadarohana baomba any Benghazi.#libya
@iyad_elbaghdadi: Hatramin'izao, onjan'ny fanafihana an'abakabaka efatra no tany Benghazi, ny tobim-piaramanidina Benina sy ny foibe miaramila iray/fitahirizana ireo fitaovana. Mitatitra fahasimbana maivana ny mpitondra teny. #Libya
Tonga ny tatitra fa hoe voanjera ireo fiaramanidina mpomba an'i Gaddafi:
@feilefey: @ChangeInLibya miteny ny nenitoako any Benghazi fa nisy fiaramanidina iray nianjera ary roa no voasambotra.
@NahlahAyed: Patrick Graham any Benghazi: mampaneno anjomara ny vahoaka mba hankalazana izany fianjeran'ny fiaramanidina izany. Miandry am-pientanentanana fatratra ny fifidianana ataon'ny UNSC (Vaomieran'ny Filaminana ao amin'ny Firenena Mikambana).#libya
@ChangeInLibya: Miisa 3-4 ireo fiaramanidina saika niezaka hanapoaka an'i Benghazi androany ary samy tsy nahavoa daholo izy ireo ka nianjera. Tsy dia nisy fahasimbana firy. #libya #feb17
Ity misy lahatsary, nampakarin'ny Feb 17, 2011, izay maneho ny fianjeran'ny fiaramanidina iray tany amin'ny faritra ambanivohitr'i Benghazi .
Misy ihany koa ny tatitra momba ny valim-panafihan'ireo hery mpanohitra an'i Gaddafi.
@NahlahAyed: Milaza ireo tatitra fa nanafika ny tafiky ny fitondrana avy amin'ny alalan'ireo fiaramanidina sy helikoptera efa nomaniny taloha ireo mpomba ny demokrasia.#libya
Tsy nisy na iray aza sahy nieritreritra ny metyh ataon'ireo herin'i Gaddafi raha lavo i Benghazi. Ali, ltovolahy iray nandray anjara tamin'ireo hetsi-panoherana nandritra ireo andro vitsy lasa dia voasambotra ny 17 Febroary. Tamin'izy tao am-ponja, niteny izy fa matetika ireo olon'ny governemanta no nidaroka azy sy ireo hafa (anisan'izany ny fampiasana herinaratra) ary avy eo dia namela ireo andian'olona ireo ho toy ny maty. Ankehitriny i Ali dia mipetraka anaty seza taritina sisa. Fa ireo olona 25 hafa niaraka voasambotra taminy kosa — anisan'izany ny lahiantitra iray tokony ho 70 taona fara faha-keliny — dia maty daholo.
Ny fikambanana misahana ny zon'olombelona any Etazonia Human Rights Watch dia nampitandrina fa mety hahavanon-doza be ny fitondran'i Gaddafi raha azony indray i Benghazi. Ny vondrona, miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny Amnesty International, ny Vokovoko Mena sy ireo Mpitsabo Tsy Voafetran-Tsisintany, dia nisintona ny mpiasany ivelan'ny tanàna.
Nikisaka tamim-pahakiviana nankany amin'ny sisintany ihany koa ny vahoaka:
@malaikamakena: vahoaka 1200 tany #Libya no nitsaoka tany #Egypt omaly, maro ireo fianakaviana manahy fa mety ho voadaroka baomba i Benghazi.avy amin'i @melissarfleming (avy ao amin'ny @Refugees – Masoivohon'ny Firenena Mikambana ho an'ireo mpitsoa-ponenana)
Na eo aza izany, toa voaaro tsara noho ireo toerana misy ny mpikomy hafa ny tanàna. Fred Abrahams, mpanolo-tsaina manokana ny Human Rights Watch dia niteny:
“Fantatray fa ary fitaovam-piadiana kokoa sy matihanina ireo mpihoko ao Benghazi, fa tsy tahaka ireo lehilahy tanora nihazakazaka nankany am-bava-ady. Fantatsika fa hijanona hatramin'ny farany ireo olona izay nanomboka izany, nefa tena fadiranovana ny vahoaka. Fantatr'izy ireo i Gaddafi ary fantany fa ity karazana fikomiana ity dia na hiafara amin'ny fandresena na ny faharesena.”
Nisy ihany koa ireo mpitsikera sasany nilaza fa mbola tsy very daholo akory ny zava-drehetra ho an'ny fahafahan'ireo Libyana. Avy amin'ny mpandinika an'i Libya, Fat Belly Man:
Ireo tenin'i Saif Gaddafi milaza fa hifarana ny fikomiana amin'ny faran'ny herinandro aza dia naverimberiny tsy nisy fandinihana sy tsikera. Zavatra telo no nanjary nazava hatreto:
* Niditra tamin'ny ady ara-tsaina amin'ireo liam-pivoarana sy ny mpanara-dia azy i Saif Gaddafi. Ity ampahan'ady ity dia manan-danja lehibe eo amin'ny fitondrana ary mampisy fiantraikany any Andrefana. Ireo mpanao politika sasany, indrindra ireo mpifikitra amin'ny fahiny, amin'ny endrika vaovao, dia mampiasa ihany koa ity fampielezan-kevitra ity mba handaminany ny fandaharan'asany
* Niditra tamin'ny fanindronindronana fahatany ny Tandrefana ny fitondrana Libiana. Mety ho fitsotsorana goavana be ho an'ireo mpomba an'i Gaddafi ny fanafihan'ny miaramila, mety hampihetsiketsika ny fanohanany izay efa very fanantenana sy hamerina indray ireo misalasala ho any am-balan-dry zareo. I Saif manokana dia mahatakatra fa ny fandresena tanteraka azon'ny ankilany mpitroatra dia ho olana any Andrefana ka dia milalao ireny tahotra ireny tahotra.
* Rehefa natao ny tomban'ezaka matotra, misy mahita fa ny toerana misy ny miaramila eny an-tanin'ady dia tsy misy ifandraisany amin'ireo nolazain'ny media sy ny mpomba an'i Gaddafi. Voafetra tanatin'ny vondron-tany iray ny ady tany Atsinanana nandritra ny andro maro. Ilaina atao an-tsaina ihany koa fa tsara sy mety daholo ireo fitaovam-piadiana matanjaka kanefa mila baoty eny an-kianja ireny mba hitazonana ny zaratany nefa toa tsy manana ireo isa ilaina ny fitondrana.
Ity ady ara-tsaina nakopakopaky ny fianakavian'i Gaddafi ity dia mamorona fihetsehampon'ny tsy afa-manoatra ho an'ireo firenena ivelany, hoy i Fat Belly Man.
Mety ho sodokan'ny ady ara-tsaina nakopakopaky ny fitodrana Gaddafi ireo mpitsikera ary hanary ny fametrahana ny zavatra iray ho ao anatin'ny toerana tokony hisy azy. Mety ho mifanohitra amin'ny zavatra tsara nokasainy ny antson'izy ireo Hametrahana Faritra tsy azo Isidinana sy ireo fomba hafa hirotsahan'ny miaramila ka hanjary hilalao ny lalaon'i Col Gaddafi
Ireto misy tatitra hafa vitsivitsy tao amin'ny Twitter mikasika ireo fiarovana amin'ny ankapobeny any Benghazi.
@GinaMombo: Mpampianatra lalàna any Benghazi #Lybia: Vahoaka sahy izahay ary hiady. Kanefa dia ho resy ihany koa izahay raha tsy misy ny fanampian'ny firenena eran'izao tontolo izao
@iyad_elbaghdadi: Iraky ny mpitaky fanovàna any #Libya tany amin'ny Firenena Mikambana: Tsara ny toerantsika na io ara-tetikady na miaramila, na eo aza ny tsy fifandanjan'ny fitaovam-piadiana.
Manontany ny mpitoraka Tweet iray hoe aiza ireo miaramila Lybiana tsy manjary?
@yqxo: @iyad_elbaghdadi Aiza ireo miaramila “tsy manjary”? Ilaozan'izy ireo misotro kafe sy ronono any Malta? Mbola ireo mpikomy tsy za-draharaha fotsiny ihany no hitanay.
@iyad_elbaghdadi: @yqxo Misy vondron-dehilahy 8000 manam-pahaizana manokana ao amin'ny tafika miaraka amin'ity revolisiona ity, nefa tsy mizahozaho amin'ny fihetsehiny izy ireo.
Raha miady hevitra amin'ny hananganana faritra tsy azo isidinan'ny fiaramanidina ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikambana sy ireo mpikambana ao amin'ny OTAN, misy ireo mpikambana sasany amin'ny mpihoko no tsy te-hahita miaramila any Libya.
@iyad_elbaghdadi: @bugpopper Tsy te-hahita ireo miaramila eo amin'ny taniny ny Libiaa na avy aiza izany na avy aiza, ankoatra ireo Arabo sy Silamo izany mazava ho azy